“ခွန်ကောရီယို” ကို လွှတ်ပေး – Free Khun Kawrio! | MoeMaKa Burmese News & Media
လွိုင်ကော်မြို့ မှ ကယန်းလူငယ်လေး ခွန်ကောရီယို (Khun Kawrio) ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် NO Vote ကန်ပိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် မြင်းခြံထောင်တွင် ၃၇နှစ် ကျခံနေရတယ်လို့ရပါတယ်..
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ သူနှင့်အတူ အမှု့ တွဲလူငယ်၂ဦးလွှတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ခွန်ကောရီယိုကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်..
ခွန်ကော်ရီယိုနှင့်အတူ ကျန်ရှိနေသေးသော လူမသိ သူမသိ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားပြီး ထောင်နှစ်ရှည်များချထားသော အညတြရသူရဲကောင်းများ အားလုံးကို မြန်မာနှစ်သစ်ကူးနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မှာ လွတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်…
မစံပါယ်ဖြူ – www.facebook.com/sabaiphyu9
3 Responses to “ခွန်ကောရီယို” ကို လွှတ်ပေး – Free Khun Kawrio!
linnmgmg on April 16, 2012 at 9:09 pm
hla htay on April 17, 2012 at 9:10 am
Mon on April 17, 2012 at 1:28 pm
FREE ALL THE PEOPLE WHO ARE IMPRISONED JUST FOR EXPRESSING THEIR WILL!!!! It’s ridiculous if they are doing real reforms, why don’t they release these innocent people????